Orinasa vao manomboka: efa ahitana karazany maro ny zava-bitan’ny tanora | NewsMada
Orinasa vao manomboka: efa ahitana karazany maro ny zava-bitan’ny tanora
Ny 3 sy 4 aogositra 2018 teo tao amin’ny Carlton ny fampisehoana natao momba ny orinasa madinika na PME sy ireo izay vao manomboka (Startups). Eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Indostria fa teo indrindra koa ny CEERE*, nikarakara ny fotoana. Samy ahitana karazany maro tao amin’ny Carlton : ny fambolena sy ny fiompiana, ny famokarana sakafo, ny informatika, ny fandraisam-bahiny, sns. Efa maro ny zava-bitan’ny tanora malagasy, saingy olana matetika, tsy ampy tosika izy ireo.
Namaly izany ny minisitra Randrianarisoa Guy Rivo fa «tsy tokony hiandry fotsiny ny tanora izay maro anisa indrindra amin’ny mpifidy. Anjaranay ato amin’ny minisitera ny manamora ny asanareo ». Kendrena tamin’iny seho natao tao amin’ny Carlton iny ny mpianatra, ny mpandraharaha mba hanampy, ireo manana tolo-kevitra. Ankoatra ny fampisehoana, nisy ny famelabelaran-kevitra, ny atrikasa, ny fampiofanana nataon’ny teknisianina mifandrify amin’izany. Nohamafisin’ny minisiteran’ny Indostria, ohatra, ny fizorana mankany amin’ny indostria.
Amin’izay fizorana mankany amin’ny indostria izay, tsy azo ialana amin’izao fotoana izao ny « digital ». Tsy afa-misitraka izany avokoa anefa ny tanora mpandraharaha raha vao miditra amin’ity sehatra ity raha tsy ampy ny herinaratra, indrindra fa any amin’ny faritra.
Tsara ny fampisehoana natao tao amin’ny Carlton, nefa tokony hojerena ihany koa ny tanora any amin’ny faritra, manana ny heviny sy ny talentany, araka izay faritra misy azy ireny avy. « Tokony hifanaraka tsara amin’izany ny lalàna momba ny indostria, na LDI (loi sur le développement industriel) », hoy ny minisitra.